ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၂)အပြီး ပြေးအားအကောင်းဆုံးက ဘယ်သူများလဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၁၂)အပြီး ပြေးအားအကောင်းဆုံး ကစားသမားများ
13 Nov 2018 . 12:22 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကတော့ ပြိုင်ပွဲကာလ (၃)ပုံ (၁)ပုံနီးပါးကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ပွဲစဉ် (၁၂)ကစားပြီးချိန်မှာ ပျမ်းမျှပြေးအားအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ကစားသမား (၁၀)ဦးကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် . . .
10 Mohamed Diame – Newcastle – 131.14km
နယူးကာဆယ်အသင်းရဲ့ ၀က်စ်ဟမ်းကွင်းလယ်လူဟောင်း မိုဟာမတ်ဒီယာမီ Mohamed Diame က အခုစာရင်းမှာ အဆင့်(၁၀)နေရာ ရရှိခဲ့တယ်။ ဒီယာမီရဲ့ ပြေးအားက စုစုပေါင်း (၁၃၁.၁၂)ကီလိုမီတာ (၈၁မိုင်)အထိ ရှိတာကြောင့် ပြေးအားအကောင်းဆုံး ကစားသမားစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပါ။
9 Granit Xhaka – Arsenal – 131.59km
ဒီရာသီ နည်းပြသစ် အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery လက်ထက်မှာ ပုံစံကောင်းပြသနေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ချာကာ Granit Xhaka ဟာ ပြေးအားကောင်းတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီးအထိ (၁၃၁.၅၉)ကီလိုမီတာ ပြေးခဲ့ပါတယ်။
8 Wilfred Ndidi – Leicester City – 131.71km
ကွန်တေ N’Golo Kante ရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့အတွက် အန်ဒီဒီ Wilfred Ndidi ကို ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၂၁)နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ အန်ဒီဒီဟာ ကွန်တေရဲ့ခြေရာကို လိုက်နင်းမယ့်ကစားသမားလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။
7 Philip Billing – Huddersfield – 136.56km
ဟတ်ဒါဖီးလ်အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားနေပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖိလစ်ဘီလ်လင်း Philip Billing ကတော့ အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပြေးအားက (၁၃၆.၅၆)ကီလိုမီတာအထိ ရှိနေတာက အံ့အားသင့်စရာပါ။
6 Marcos Alonso – Chelsea – 137.32km
ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဟာဇက် Hazard နဲ့ တွဲဖက်ပြီး ခြေစွမ်းပြနေသူက မားကို့စ်အလွန်ဆို Marcos Alonso ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစစ်နဲ့ တိုက်စစ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် အတက်အဆင်း လုပ်နိုင်သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ပြေးအားနဲ့ပတ်သက်လို့ ပရိသတ်တွေကို အထူးပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။
5 Abdoulaye Doucoure – Watford – 137.33km
၀က်ဖို့ဒ်အသင်းနည်းပြ ဟာဗီဂါစီယာ Javi Gracia ရဲ့ ဒီရာသီ စီမံကိန်းတွေထဲမှာ ဒိုကိုယေ Abdoulaye Doucoure က အဓိကနေရာမှာ ပါဝင်နေတယ်။ ဒိုကိုယေဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်ရုံသာမကဘဲ ပြေးအား၊ တိုးအားလည်း ကောင်းမွန်သူတစ်ဦးပါ။
4 Jorginho – Chelsea – 137.43km
ဒီစာရင်းမှာ ယော်ဂျင်ဟို Jorginho အဆင့်(၄)နေရာရခဲ့တာက နည်းနည်း အံ့အားသင့်စရာကောင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ယော်ဂင်ဟိုဟာ ပြိုင်ဘက်ကွင်းဘက်ခြမ်းမှာ ပြေးလွှားကစားတာကို သိပ်မတွေ့ရလို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ယော်ဂျင်ဟိုရဲ့ တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ပြေးအားက (၈၅)မိုင်အထိ ရှိခဲ့တာကြောင့် ထိပ်ဆုံး(၄)ဦးအတွင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
3 Ruben Neves – Wolves – 138.63km
၀ုလ်ဗ်အသင်းမှာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကို ခြေစွမ်းပြ ကစားနေသူက ပေါ်တူဂီလူငယ်ကစားသမား ရူဘင်နီးဗတ်စ် Ruben Neves ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်(၃)ခုနဲ့ ကစားသမားလို့ တင်စားရလောက်အောင် သူ့ရဲ့ ပြေးအားက ကြောက်ခမန်းလိလိပါ။
2 Luka Milivojevic – Crystal Palace – 140.69km
အသင်းခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသစွာနဲ့ ပဲလေ့စ်အသင်း ကွင်းလယ်ကို ဦးဆောင်နေပြီး ပယ်နယ်တီ ကန်သွင်းတဲ့နေရာမှာလည်း တိကျသေသပ်သူပါ။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပဲလေ့စ်အသင်း ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့နိုင်အတွက် မီလီဗိုယီဗစ် Luka Milivojevic ရဲ့ ခြေစွမ်းက အဓိကနေရာကနေ ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
1 N’Golo Kante – Chelsea – 141.87km
ပြေးအားအကောင်းဆုံး ကစားသမားဘွဲ့ကိုတော့ ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်လူ ကွန်တေ N’Golo Kante က အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ပွဲစဉ် (၁၂)အပြီး သူ့ရဲ့ပြေးအားက ပျမ်းမျှ (၈၈)မိုင်အထိရှိပြီး ဒါဟာ လန်ဒန်ကနေ ဘရိုက်တန်မြို့ကို အသွားအပြန်အကွာအဝေးလောက်ရှိပါတယ်။
Photo:The Northern Echo,These Football Times,dreamteamfc
ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ (၁၂)အပွီး ပွေးအားအကောငျးဆုံး ကစားသမားမြား
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကတော့ ပွိုငျပှဲကာလ (၃)ပုံ (၁)ပုံနီးပါးကို ရောကျရှိလာပါပွီ။ ပှဲစဉျ (၁၂)ကစားပွီးခြိနျမှာ ပမျြးမြှပွေးအားအကောငျးဆုံးဖွဈနတေဲ့ ကစားသမား (၁၀)ဦးကို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ . . .
နယူးကာဆယျအသငျးရဲ့ ဝကျဈဟမျးကှငျးလယျလူဟောငျး မိုဟာမတျဒီယာမီ Mohamed Diame က အခုစာရငျးမှာ အဆငျ့(၁၀)နရော ရရှိခဲ့တယျ။ ဒီယာမီရဲ့ ပွေးအားက စုစုပေါငျး (၁၃၁.၁၂)ကီလိုမီတာ (၈၁မိုငျ)အထိ ရှိတာကွောငျ့ ပွေးအားအကောငျးဆုံး ကစားသမားစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျခှငျ့ရရှိခဲ့တာပါ။
ဒီရာသီ နညျးပွသဈ အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery လကျထကျမှာ ပုံစံကောငျးပွသနတေဲ့ ကှငျးလယျလူ ခြာကာ Granit Xhaka ဟာ ပွေးအားကောငျးတဲ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီးအထိ (၁၃၁.၅၉)ကီလိုမီတာ ပွေးခဲ့ပါတယျ။
ကှနျတေ N’Golo Kante ရဲ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့အတှကျ အနျဒီဒီ Wilfred Ndidi ကို ချေါယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အသကျ(၂၁)နှဈအရှယျသာ ရှိသေးတဲ့ အနျဒီဒီဟာ ကှနျတရေဲ့ခွရောကို လိုကျနငျးမယျ့ကစားသမားလို့ပဲ ပွောရမှာပါ။
ဟတျဒါဖီးလျအသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒျတှေ ဆိုးရှားနပေမေယျ့ သူတို့ရဲ့ ကှငျးလယျလူ ဖိလဈဘီလျလငျး Philip Billing ကတော့ အသငျးအတှကျ အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးပွကစားနသေူဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပွေးအားက (၁၃၆.၅၆)ကီလိုမီတာအထိ ရှိနတောက အံ့အားသငျ့စရာပါ။
ခယျြလျဆီး တိုကျစဈ ဘယျဘကျခွမျးမှာ ဟာဇကျ Hazard နဲ့ တှဲဖကျပွီး ခွစှေမျးပွနသေူက မားကို့ဈအလှနျဆို Marcos Alonso ဖွဈပါတယျ။ ခံစဈနဲ့ တိုကျစဈကို ဟနျခကျြညီအောငျ အတကျအဆငျး လုပျနိုငျသူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ပွေးအားနဲ့ပတျသကျလို့ ပရိသတျတှကေို အထူးပွောစရာလိုမယျ မထငျပါဘူး။
ဝကျဖို့ဒျအသငျးနညျးပွ ဟာဗီဂါစီယာ Javi Gracia ရဲ့ ဒီရာသီ စီမံကိနျးတှထေဲမှာ ဒိုကိုယေ Abdoulaye Doucoure က အဓိကနရောမှာ ပါဝငျနတေယျ။ ဒိုကိုယဟော ခန်ဓာကိုယျ ကွံ့ခိုငျရုံသာမကဘဲ ပွေးအား၊ တိုးအားလညျး ကောငျးမှနျသူတဈဦးပါ။
ဒီစာရငျးမှာ ယျောဂငျြဟို Jorginho အဆငျ့(၄)နရောရခဲ့တာက နညျးနညျး အံ့အားသငျ့စရာကောငျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ပှဲစဉျတှမှော ယျောဂငျဟိုဟာ ပွိုငျဘကျကှငျးဘကျခွမျးမှာ ပွေးလှားကစားတာကို သိပျမတှရေ့လို့ပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ယျောဂငျြဟိုရဲ့ တဈပှဲပမျြးမြှ ပွေးအားက (၈၅)မိုငျအထိ ရှိခဲ့တာကွောငျ့ ထိပျဆုံး(၄)ဦးအတှငျးမှာ ပါဝငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဝုလျဗျအသငျးမှာ ထငျထငျရှားရှားကွီးကို ခွစှေမျးပွ ကစားနသေူက ပျေါတူဂီလူငယျကစားသမား ရူဘငျနီးဗတျဈ Ruben Neves ပဲဖွဈပါတယျ။ အဆုတျ(၃)ခုနဲ့ ကစားသမားလို့ တငျစားရလောကျအောငျ သူ့ရဲ့ ပွေးအားက ကွောကျခမနျးလိလိပါ။
အသငျးခေါငျးဆောငျကောငျး ပီသစှာနဲ့ ပဲလစျေ့အသငျး ကှငျးလယျကို ဦးဆောငျနပွေီး ပယျနယျတီ ကနျသှငျးတဲ့နရောမှာလညျး တိကသြသေပျသူပါ။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပဲလစျေ့အသငျး ဆကျလကျရပျတညျဖို့နိုငျအတှကျ မီလီဗိုယီဗဈ Luka Milivojevic ရဲ့ ခွစှေမျးက အဓိကနရောကနေ ပါဝငျနတောဖွဈပါတယျ။
ပွေးအားအကောငျးဆုံး ကစားသမားဘှဲ့ကိုတော့ ခယျြလျဆီးကှငျးလယျလူ ကှနျတေ N’Golo Kante က အငွငျးပှားဖှယျမရှိ ပိုငျဆိုငျထားတယျ။ ပှဲစဉျ (၁၂)အပွီး သူ့ရဲ့ပွေးအားက ပမျြးမြှ (၈၈)မိုငျအထိရှိပွီး ဒါဟာ လနျဒနျကနေ ဘရိုကျတနျမွို့ကို အသှားအပွနျအကှာအဝေးလောကျရှိပါတယျ။